HOR DHAC: Germany V Waqooyiga Ireland – Gool FM
(Paris) 21 Juunyo 2016.Waqooyiga Ireland waxa ay isha ku hayaan in ay natiijadii ugu la yaabka badneyd ka helaan kulanka ay la leeyihiin horyaalka aduunka.
Ireland oo u muuqata in ay ku soo bixi doonto kaalinta saddexaad si ay qeyb uga noqoto dalalka afarta booska saddexaad ugu wanaagsan ee au u gudbaya wareega 16-ka ayaa labadii kulan ee ay hore u so dheshay midna badisay midna laga badiyey.
Germany hadii ay badiyeen, Poland-na aysan badin waxa ay heli doonaan booska kowaad ee Group-kooda.
– Michael O’Neil ma leh sabab uu is badal ugu sameeyo safkii ka adkaaday Ukraine kulankii ugu dambeeyey, taas waxa ay la micne tahay in Kyle Lafferty uu keydka ku soo bilaaban doono.
-Waqooyiga Ireland afar ciyaaryahan ayaa kaar huruudi ah u jira in ay kulankan kan xiga ku seegaan balse dagaal ayey ugu gali doonaan sidii ay 16-ka u gaari lahaayeen.
-Germany wali kaalinta saddexaad ayey ku dhameysan karaan markaaJogi Low ma sameyn karo is badalo badan, laakiin waa in uu kalsooni u qabaa cidii uu xusho madaama uu haysto raxan ciyaaryahano ah oo hibo badan.
– Jerome Boateng, Mesut Ozil iyo Sami Khedira intaba kaar jaale ah ayey u jiraan in ay ganaax ku seegaan kulanka kan xiga, Low wuu nasin karaa.
-Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Thomas Muller weerarka loo adeegsan doono, taas waxa ay la micne tahay in Leroy Sane uu heerka calaami iska soo xaadirin karo.
– Bastian Schweinsteiger ayaa fursad heli doona hadii Sami Khedira la nasiyo.
– Benedikt Höwedes kuma soo bandhigin ciyaar wanaagsan dambeedka mididg, Low waxa uu jaleeci karaa Emre Can kulanka Waqooyiga Ireland.
-Labada qaran waxa ay hore u kulmeen 14 jeer, Germany waxa ay badisay sideed halka Waqooyiga Ireland ay adkaadeen laba mar (Afar bar bar dhac).
-Germany ayaa badisay afartii kulan ee labada dhinac isugu dambeeysay, 14 gool ayey dhaliyeen halka laba uun la daba mariyey ciyaarahaas; hore kulamadaas Germany shan jeer kama aysan badin Waqooyiga Ireland (Saddex bar bar dhac iyo laba guul daro).
-Germany waxa ay Waqooyig Ireland uga badiyeen 4-1, kulan saaxiibtinimo oo bishii June 2015 ku dhex maray Belfast. David Healy ayaa goolka kaliya u dhaliyey wiilasha cadaanka iyo cagarka ku dheela halka goolka ugu dambeeyey uu Germany u saxiixay Lukas Podolski.
-Guushii ugu dambeeysay ee Waqooyiga Ireland ay ka gaarto Germany waxa ay ahayd 16-kii November 1983. 1-0 ayey uga badiyeen kulan ka dhacay Hamburg oo uu u dhaliyey Norman Whiteside.
-Walow ayey tahay hada markii ugu horeeysay ee ay Waqooyiga Ireland ka soo qeyb gasho koobka qaramada qaarada Yurub, labada dal hore waxa ay is reeb reebka tartanka isku arkeen,midkoodba laba mar ayuu badiyey.
-Labada mar ee ay Waqooyiga Ireland uga badisay Germany is reeb reebka waxa ay ahayd 1984 waana halka mar ee Die Mannschaft looga badiyey olole is reeb reeb ah guri iyo banaan.
-Waqooyiga Ireland mar qura ayey guul dareeysteen 14 kulan oo heer caalami ah (1-0 Poland waana bilowgii tartankan), toddobo mar ayey badiyeen halka lix jeer ayey bar bar dhac galeen).
-Waqooyiga Ireland lagama dhalin gool wax ka badan 15-kii kulan ee ugu dambeeysay kulamada heer caalami. Markii ugu dambeeysay oo gool wax ka badan looga shanqariyo shabaqooda waxa ay ahayd November 2014, waxaa 2-0 ku garaacday Romania.
-Toddobo ka mida 10-kii goo lee Waqooyiga Ireland ay dhaliyaan waxa ay ka yimaadeen kubadaha dhulka yaal (Afar gees ka laad, saddex darbooyin xor ah).
Kaarka huruudiga ah ayey u jiraan in ay kulanka kan xiga ku seegaan: Cathcart, Dallas, Evans, Ward
Kaarka huruudiga ah ayey u jiraan in ay kulanka kan xiga ku seegaan: Boateng, Khedira, Özil
Gegida: Parc des Princes
RASMI: Laurent Blanc oo ka tagaya Paris Saint - Germain iyo Unai Emery oo lagu wado in uu dhaxlo